» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ५
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ५
१७ चैत्र २०७६, सोमबार २१:०४
मकवानपुर, १७ चैत । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चित बन्दैछ । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस शोका ३ वटा अडिसन राउण्डहरु प्रसारण भईसकेका छन् । यस भिडियो सिरिजको पाँचौँ भागमा पोखरा अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका अन्तिम ४ प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस सामग्रीमा मानव परियार सहित नाम उल्लेख नगरिएका थप ३ प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका तेह्रौँ प्रतियोगीको नाम पनि टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइएको थिएन । उनले ‘तिमीले साथ छोडिदिँदा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् । नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका चौधौँ प्रतियोगीको नाम पनि टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइएको थिएन । उनले ‘खाली दोष दिँदै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् । नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका पन्ध्रौँ प्रतियोगीको नाम पनि टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइएको थिएन । उनले ‘गाईने दाजैले’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएकी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
१६) मानव परियार– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका सोह्रौँ प्रतियोगी हुन् मानव परियार । उनले अडिसनमा ‘मायाको डोरीले’ बोलको गीत गाएका थिए । रकिङ प्रस्तुति दिएका मानवलाई सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट गरिएको हो । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।